Saagi - Qabii filadhu
Baafata halqalaa banitii - Qabii filadhu
Filmaata ammaaf filannoo qabii qindeessa.
Akaakuu qabii, yk maqaa Akaakuu qabii haaraa barreessi. Moggaasii qabii keessaa barruun akaakuu lakkoofsa qabii dura mul'ata. Tokkoon tokkoon akaakuu qabii durmurtaawaa akkaataa keewwataa maqaa walfakkaataaniin kan dhangeeffameedha. Fakkeenyaaf, akaakuun qabii "Fakkiibsaa" akkaataa keewwataa "Fakkiibsaa" tiin dhangeeffama.
Qabii keessaatti gosa lakkaawwii fayyadamuu barbaaddu filadhu.
Lakkoofsa qabii booda barruu akka mul'atu barbaaddu barreessi.
Lakkoofsaaf barruu qabii giduutti arfiiwwan barruu dirqalee galchi.
Maalimaa filatamee jalatti ykn irratti qabii dabala. Filannoon kun wanta murta'aaf qofa.
Title is: Qabii